တရုတ်နှစ်ထပ် homogenizer ဖုန်စုပ်စက် emulsifying ရောနှောစက်|အလှကုန် Emulsifier ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |ZhiTong
နှစ်ထပ် homogenizer ဖုန်စုပ်စက် emulsifying ရောနှောစက်|အလှကုန် Emulsifier
1.Double မြင့်မားသောတစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုtorque shearing motor ဒီဇိုင်း
2. Siemens တို့ထိ PLC လည်ပတ်မှုစနစ်
3. Tanks ပစ္စည်းများ။အတွင်းအလွှာ SS 316။ အလယ်နှင့် အလွှာ SS304
3.Motor အမှတ်တံဆိပ်- AAB သို့မဟုတ် Siemens ပမာဏ 100 လီတာမှ 5000 လီတာအထိ၊
5.Power supply : သုံးဆင့် 220 ဗို့ 380 ဗို့အား 460voltage 50HZ 60HZ ရွေးချယ်မှုအတွက်
6. ပို့ဆောင်ချိန် 30 ရက်
7. စနစ်ဖွဲ့စည်းမှု- ရေအဆင့်အိုး၊ ဆီအဆင့်အိုး၊ emulsifying အိုး၊ ဖုန်စုပ်ပန့်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ အလုပ်လုပ်သည့်ပလပ်ဖောင်း၊ လှေကားနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ
1.အောက်ခြေပစ္စည်းထွက်ပေါက်၊ ထုတ်ကုန်များသည်အောက်ခြေမှထွက်လာနိုင်သည်။သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ကို လျင်မြန်စွာ စုပ်ထုတ်ရန် ပန့်ကို ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
2.တင်သွင်းလာသော SUS304 သို့မဟုတ် SUS316L သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ရောစပ်ထားသော တိုင်ကီကိုယ်ထည်နှင့် ပိုက်ကို မှန်ပေါ်လစ်ဖြင့် အုပ်ထားသည်။
3.ပစ္စည်းအဆက်အသွယ်အပိုင်း SS316။ဂျာကင်အင်္ကျီအပူပေးခြင်း၊ လျှပ်ကာအလွှာနှင့် အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပကို ပွတ်ပေးခြင်း။
4.အိုးကိုယ်ထည်ကို ကိုရီးယား POSCO မှတင်သွင်းသော သုံးလွှာစတီးလ်ပြားဖြင့် ဂဟေဆော်ထားသည်။တိုင်ကီကိုယ်ထည်နှင့် ပိုက်များသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ပြည့်မီသော မှန်ပေါ်လစ်တိုက်ခြင်းကို လက်ခံပါသည်။
5. အလှကုန် Emulsifierတူညီသောဖွဲ့စည်းပုံကို ဂျာမန်နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။စက်သည် improted double-end mechanical seal effect ကို လက်ခံပါသည်။ အမြင့်ဆုံး emulsifying rotation speed သည် 3500rpm သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး မြင့်မားသော shearing fineness သည် 0.2-5um သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
6.Cosmetics Emulsifierထွက်ပေါက်၊ ထုတ်ကုန်များသည်အောက်ခြေမှထွက်လာနိုင်သည်။သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ကို လျင်မြန်စွာ စုပ်ထုတ်ရန် ပန့်ကို ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
7.တင်သွင်းလာသော SUS304 သို့မဟုတ် SUS316L သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ရောစပ်ထားသော တိုင်ကီကိုယ်ထည်နှင့် ပိုက်ကို မှန်ပေါ်လစ်ဖြင့် အုပ်ထားသည်။
8.ပစ္စည်းအဆက်အသွယ်အပိုင်း SS316။ဂျာကင်အင်္ကျီအပူပေးခြင်း၊ လျှပ်ကာအလွှာနှင့် အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပကို ပွတ်ပေးခြင်း။
9.အိုးကိုယ်ထည်ကို ကိုရီးယား POSCO မှတင်သွင်းသော သုံးလွှာစတီးလ်ပြားဖြင့် ဂဟေဆော်ထားသည်။တိုင်ကီကိုယ်ထည်နှင့် ပိုက်များသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ပြည့်မီသော မှန်ပေါ်လစ်တိုက်ခြင်းကို လက်ခံပါသည်။
၁၀။ဖုန်စုပ်စက် လည်ပတ်မှုအောက်တွင် ဤမွှေစက်သည် ပြင်ပလေနှင့် ရောစပ်ခန်းထဲသို့ ဘောက်လုံးများဝင်ရောက်ခြင်းမှ လုံးလုံးဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်သည်။
၁၁။triple mixing သည် မတူညီသော နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော speed adjustment အတွက် တင်သွင်းလာသော frequency inverter ကို လက်ခံပါသည်။
၁၂။အဆက်အသွယ် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို SS316L ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မှန်ကို ပွတ်တိုက်ထားသည်။
၁၃။အချိန်တိုအတွင်း ပြီးသွားမည့် ထုတ်ကုန်ကို ပိန်စေခြင်း၊ emulsification၊ ရောစပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
14.Cosmetics Emulsifierမတူညီသော viscosity ရှိသော ပစ္စည်းများအတွက် တိကျသောဒေတာကိုပေးဆောင်ရန် တုံ့ပြန်ချက်အမြန်နှုန်းတိုင်းတာခြင်းကို လက်ခံပါသည်။
၁၅။ပိုက်များဖြင့် ဒေါင်လိုက် အမျိုးအစား inline homogenizer ဖြင့် ပြင်ပ emulsifying နှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊
၁၆။ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် ညစ်ညမ်းစေသော အရာများသည် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပိုးမွှားအဖြစ် လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။အသုံးပြုထားသော ဖုန်စုပ်စုပ်ပစ္စည်းသည် အထူးသဖြင့် အမှုန့်ထုတ်ကုန်များအတွက် ဖုန်မှုန့်များကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
17.vacuum emulsifying ပစ္စည်းကိရိယာလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေရန် အပူပေးအအေးပေးစနစ် တပ်ဆင်ထားပါသည်။
18.Cosmetics Emulsifierဤတူညီသောကိရိယာများအတွင်းတွင်၊ သင်သည် အပူ-အရည်ပျော်-အရည်ပျော်-emulsifying-လေပူဖောင်းကိုလျှော့ချခြင်း(လေဟာနယ်)-ရေယာဉ်များကိုမပြောင်းလဲဘဲ အအေးခံခြင်းမှ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် သင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် လုပ်အားနှင့် အချိန်များစွာကို သက်သာစေပါသည်။
19.Cosmetics Emulsifierမော်တာပါဝါကို ပိုမိုသေချာစွာ အားကောင်းစေရန် ဘွိုင်လာအောက်ခြေတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ထုတ်လုပ်မှုအနည်းငယ်အတွင်း၊ ၎င်းသည် တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အပြည့်အဝရရှိစေနိုင်သည်။
၂၀။အိုးအတွင်းရှိပစ္စည်းကို အရှိန်မြင့်အတွင်းလည်ပတ်မှုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ရောစပ်ခြင်းနှင့် emulsification၊ ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ထပ်မွှေခြင်း၊ နာရီလက်တံဘောင်အမျိုးအစား နံရံကိုခြစ်ထုတ်ခြင်း၊ နာရီလက်တံတိုင်ခတ်လှော်တက်မွှေခြင်းအမျိုးအစားတို့ဖြင့် emulsified ပြုလုပ်ပါသည်။
၂၁။ရေကန်တစ်ခုလုံးအလှကုန် Emulsifierသုံးလုံးအကျီ င်္။စက်ပစ္စည်းများ၏ အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်းတို့ကို တူညီသောဂျာကင်အင်္ကျီတွင် ပြီးမြောက်စေပါသည်။
၂၂။ဂျာကင်အင်္ကျီ၏အပြင်ဘက်အလွှာတွင် အလူမီနီယမ်ဆီလီကိတ် လျှပ်ကာအလွှာပါရှိပြီး အော်ပရေတာအား မီးလောင်မှုမဖြစ်စေရန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုဘေးကင်းမှုကို သေချာစေသည်။
၂၃။အိုးအလှကုန် Emulsifierအောက်ခြေအဆို့ရှင်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး၊ အားထုတ်ခြင်းသည် အဖုံးကို မြင့်တက်စေရန်၊ လက်ဖြင့် စွန့်ပစ်ခြင်း၊ တိမ်းစောင်းမှုထောင့်သည် 90 ဒီဂရီထက် ပိုကြီးနိုင်သည်။
အကန့်အသတ်ရှိသော လေဟာနယ် (Mpa)
(၂) ဆေးဝါးလုပ်ငန်း- အစေး၊ emulsion၊ ointment (ဆီမွှေး)၊ ခံတွင်းဆေးရည် စသည်တို့။
1.ပါဝါထောက်ပံ့မှု- သုံးအဆင့် : 220v 380v .415v ။50HZ 60HZ;
2.စွမ်းရည် : 500L မှ 5000L အထိ;
3.မော်တာအမှတ်တံဆိပ်: ABBSiemens ရွေးချယ်မှု;
4.အပူပေးနည်းလမ်း- လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းနှင့် ရေနွေးငွေ့အပူပေးခြင်း ရွေးချယ်မှု။
5.ထိန်းချုပ်စနစ် plc ထိတွေ့မျက်နှာပြင်။သော့အောက်ခြေ;
6.ပုံသေအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းခြင်း အမျိုးအစား သို့မဟုတ် အမှုန်အမွှား ရုတ်သိမ်းခြင်း၊
8.သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တောင်းဆိုချက်အရ SIP ကို ​​ရနိုင်ပါသည်။
ယခင်- အပေါ်ပိုင်း homogenizer|အလှကုန် ရောနှောစက်ဖြင့် လေဟာနယ်ကို တူညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်း emulsifier
နောက်တစ်ခု: သံမဏိအကျီဖြင့် ရောစပ်ထားသော ကန်များ
PLC နှစ်ထပ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ ဖုန်စုပ်စက်
ဖုန်စုပ်စက် အလှကုန်အတွက် Homogenizer | Homogen...
အပေါ်ပိုင်းတစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော mo ဖြင့် လေဟာနယ်ရောစပ်စက်
အဆင့်မြင့် PLC Vacuum Homogenizing Emulsifie...
ရောသမမွှေစက် နှင့် ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားတူ ခရင်မ်ရောစပ်စက် | C...
အပေါ်ပိုင်း homog ပါရှိသော လေဟာနယ်ကို တူညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်း emulsifier...